Maxay aad ugu adag tahay in aad cafiso Jacaylkaagii hore? - Aayaha
Home XIRIIRKA IYO GUURKA Maxay aad ugu adag tahay in aad cafiso Jacaylkaagii hore?
Maxay aad ugu adag tahay in aad cafiso Jacaylkaagii hore?
Waligeedba way adag tahay in labo qof oo jacayl uu ka dhaxeeyo ay kala go’aan, laakiin maxay tahay sababta ay dadka qaarkood dagaal ugu galaan sidii ay dib ugu hanan lahaayeen jacaylkoodii hore, halka kuwo kalena ay kasii cararaan masaafe dheer?
Rabitaanka ku aaddan in aan dib u shidno shumac mar hore damay wuxuu salka ku hayaa arrimo ku saabsan maskaxdeenna.
Yannes waxaa indheheeda ka qubanayay illin markii ay gacaliyaheeda George u sheegeysay in xiriirkooda uusan sii socon karin. Intii ay waddada sii socotay, haweeneydan 28 sano jirka ah ee u dhalatay Hong Kong waxay dareemeysay xoogaa nafis ah, gurigeeda ayeyna usii lugeyneysay iyadoo qalbi jaban.
Waxay ahayd markii saddexaad ee ay lamaanahan xiriirkooda burburiyaan muddo labo bilood gudahood. Markan Yannes waxay sheegtay inaysan jirin fursad kale oo ay dib isugu soo noqon doonaan.
Mar walba oo ay dib ugu noqoneysay xilliyadii hore, waxaa ka xoog badinayay xasuustii horay u dhex martay.
“Aad baan ugu xiisay isaga, maskaxdeydana waxaa mar kasta ku soo noqonayay marxaladihii farxadda lahaa ee aan isla soo marnay, sidaas darteed dhowr jeer ayaan u laabtay,” ayey tidhi Yannes.
“Laakiin sida aan u fakarno way kala duwan tahay, xaaladdaasna isma baddasho waligeed. Waxaan iska tiray dhammaan sawirradiisii ku jiray ciwannadeyda baraha bulshada, waxaana ogahay in hadda ay tahay markii ugu dambeysay ee aan isla joognay.”
Annaga oo dhan badankeen wuu nagu jiraa dareenka la xiriira in wax burburay aan dib u raadinno. Ku dhawaad saddex meelood labo meel oo ka mid ah ardayda jaamacadaha, way ku dhacdaa in dhowr jeer ay dib u soo celiyaan xiriir jacayl oo ka go’ay marar badan, halka kala bar ka mid ahna ay gogosha wadaagaan iyagoo uu xiriirkooda burburay ka dib.
Da’ yarta ayaa u badan dadka xiriirkii dumay soo nooleeya
Dib isugu soo laabashada way dhacdaa xitaa mar labada iyadoo qof kasta uu wacad ku marayo in uusan soo laaban doonin. Lamaaneyaal badan oo uu furriin dhex maray ayaa dib isugu noqda.
Dareenka noocan ah waxaa laga sameeyay heeso, riwaayado, filimo iyo barnaamijyo aan tiro lahayn.
In xiriirka la jaro kaddibna cafis mar kale la raadiyo waa arrin ku xiran maskaxdeenna. Laakiin maxaan ugu dadaaleynaa inaan dib u abuurno xiriir guuldarreystay?
Dadka ka cabsada inay kaligood ahaadaan ayaa ku dadaala inay dib ugu laabtaan jacaylkoodii hore
Marka lamaane ay kala haraan, dadka qaar waxaa ku dhaca wax ay Helen Fisher, oo ah khabiir ku takhasusay cilminafsiga, ugu yeertay marxalad “mudaharaad” ah, taas oo qofka la nacay uusan is celin karin illaa uu dib u helo qofkii xiriirka uga baxay.
Fisher iyo koox seynisyahanno ah waxay baareen maskaxda 15 qof oo uu dhawaan ka burburay xiriir jacayl. Waxaa baaritaankaas gudihiisa lagu tusay sawirrada dadkii ay isjeclaayeen, khubaraduna waxay ogaadeen in maskaxdooda ay mar walba u janjeerto dhinaca dib ugu laabashada qofkii ay kala hareen.
Muddo dheer ayey soo jirtay dabeecadda kala haridda ama burburinta xiriirka lamaaneyaasha
“Marka qof aad jeceshahay kaa fogaado, ma joojineysid jacaylka aad u qabto ruuxaas, waxaaba laga yaabaa in jacaylka aad qofkaas u qabtid uu kugu sii bato,” ayay tidhi Helen Fisher.
Waxaa mar walba firfircoon qeybta maskaxda ee qaabilsan waxyaabaha lala qabsado, dadka jacaylkooda la diidana iskama celin karaan in ay qofkii mar kale iyo mar kaleba raadiyaan.
Seynisyahannada ayaa arrintan u maleynaya in ay tahay sababta uusan qofka uga maarmi karin qofkii uu doonayay.
Arrin ku saabsan xallin la’aanta culeyska dhinaca maskaxda ee yimaada marka la kala tago ayaa qeyb ka ah rabitaanka dhaliya in lamaanuhu ay mar kale isku dayaan in ay ka shaqeysiiyaan xiriirkooda jacayl, sida uu sheegay Rene Dailey, oo ah barfasoor jaamacadda Texas ka dhiga cilmi baaris ku saabsan waxyaabaha keena burburinta iyo dib ugu laabashada hal xiriir.
Waxaa ku caawin karaa inaad ka fogaatid qofka uu xiriirkiinna burburay, xitaa haddii aad rabto inaad ku laabatid
“Waxaa suuragal ah in lamaanuhu ay dagaallamaan marka ay xiriirkooda jarayaan, laakiin wali waxay dareemayaan jacaylka,” ayuu yidhi Dailey.
Sida ku dhacday Yannes oo kale, kalinimada, xiisaha iyo xasuusta xilliyadii farxadda lahaa ayaa qeyb weyn ka qaata dib isugu laabashada, sida ay sheegtay Kristen Mark, oo ah barfasoor ku takhasustay arrimaha fayadhowr-ka xiriirka gogosha.
Baraha xiriirka bulshada, sida Facebook-ga ayaa qeyb weyn ka qaata dib u soo celinta xiriirka lamaaneyaasha, maadaama ay iska arkaan sawirrada la soo dhigo.
Lilian, oo ah gabar kale oo u dhalatay Hong Konger, da’deeduna tahay dhowr iyo labaad jir, ayaa ka mid ah dadka internet-ka isticmaala ee qalbijabka uu kusii bato marka ay baraha bulshada ku jiraan.
Mid ka mid ah talooyinka ay bixiyaan dadka caawiya lamaaneyaasha kala haray waa in qofka wax raadinaya uu muuqalakiisa qurxiyo si uu soo jiidasho ugu sameeyo jacaylkiisii hore
Maalmo ka dib markii ay gacaliyaheedii kala tageen ayey internet-ka ka raadisay qaabka ay mar kale ula heshiin karto saaxiibkeedii hore.
Waxay aragtay muuqaallo uu soo galiyay qof dadka noocaas ah ka caawinaya arrimahan. Lilian waxay sheegtay in qofkaas uu siiyay talooyin ay ka mid tahay in ay ka fogaato saaxiix.
Laakiin talooyinkaas kuma aysan guuleysanin.
Khubarada waxay soo jeedinayaan in qofka uu muddo 30 ilaa 60 maalmood ah iska ilaaliyo inuu la kulmo qofkii ay kala hareen, waqtigaasna uu naftiisa kula tacaalo sidii ay ula qabsan lahayd marxaladda cusub.
Previous articleReasons why your hair is oily and greasy
Next articleSida Loo Helo Jacayl Mar Kale Furiinka Kadib
5 uncommon facts about the human brain that will amaze you
7 Arrimood Oo Aan La Sameyn Markaad Gabar La Hadleyso
4 Talo Oo Kaa Caawinaya Inaad Doorato Xaas Kugu Haboon Oo...
“Aniga oo 9 sano jir ah ayaa gabadha walalkay ka dhintay...